ko htike's prosaic collection: March 2009
မတရားဖမ်းဆီး ခံရပြီး မြစ်ကြီးနားထောင်မှာနှစ်ရှည် အကျဉ်းချခံထားရတဲ့ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် ကိုဇာဂနာ နှင့် မိသားစုကိုယ်စား ကိုဇာဂနာ၏ မိခင်လည်းဖြစ်၊ မြန်မာ့ နိုင်ငံရေး သမိုင်းမှာ ရဲဝံ့ထင်ရှားတဲ့ သခင်မကြီးတဦးလည်းဖြစ်တဲ့ ကွယ်လွန်သူ ဒေါ်လှကြည် ခေါ် စာရေးဆရာမကြီး ယုဝတီ ကြည်ဦးအား ရည်စူး၍ လန်ဒန်မြို့ ဝိဟာရ ဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်း (Wembley ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း) တွင် ရက်လည် ဆွမ်းကပ်ပွဲ (နေ့ဆွမ်း) တစ်ခုကို (၂၆.၀၃.၀၉) ကြာသာပတေးနေ့တွင် ကပ်လှူပူဇော်မည် ဖြစ်ပါသဖြင့် တရားနာ ကုသိုလ်ယူနိုင်ရန် ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
ကုသိုလ်ပါဝင် လှူဒါန်းလိုသူများအနေဖြင့် အောက်ပါ ပုဂ္ဂိုလ်များကို ဆက်သွယ် လှူဒါန်းနိုင်ပါသည်။
ကိုထိန်လင်း ၀၇ ၉၀ ၆၆ ၀၇ ၁၉၇ artisthteinlin@gmail.com
ကိုထိုက် ၀၇ ၅၀၀ ၇၀၀ ၈၅၄ tzhtike2004@gmail.com
Venue: London Vihara (Wembley Monastery)
1 Old Church Lane London NW9 8TG
ွှTime 10:30 AM
Tube: Wembley Park | Map:
Posted by ကိုထိုက် at 10:386comments
Posted by ကိုထိုက် at 10:265comments
အကျဉ်းကျခံနေရသော နိုင်ငံကျော် ဟာသ သရုပ်ဆောင် ကိုဇာဂနာ(ကိုသူရ) ၏ မိခင် ဒေါ်ကြည်ဦး ကွယ်လွန်သွားပါသဖြင့် မိသားစုနှင့် ထပ်တူ ဝမ်းနည်းကြေကွဲမိပါသည်။
Posted by ကိုထိုက် at 15:286comments
Posted by ကိုထိုက် at 01:264comments
A flower, newley named with murderer's name, Dendrobium Thein Sein
Whatashamefull act for the whole singaporean byagroup of singaporean!!!!
Spore Botanic Garden to honor Myanmar junta leader
Myanmar's Prime Minister Thein Sein will visit Singapore and Indonesia next week, just after regional group ASEAN urged its military junta to be inclusive in elections and to free political prisoners.
Myanmar ruling junta's newspaper New Light of Myanmar reported on Friday that Thein Sein, the number four in its hierarchy, would visit the two countries "in the near future".
His visit comes afterameeting of the Association of Southeast Asian leaders at the start of the month in Thailand, at which they backed stimulus plans, opposed protectionism and said they would coordinate policies to confrontadeepening global financial crisis.
The 10 leaders of the Association of South East Asian Nations (ASEAN) urged military-ruled Myanmar "to be as inclusive as possible" in preparing for elections next year, allow all political parties to participate, and free political prisoners.
The problems with Myanmar illustrate the challenges ASEAN faces in becoming an integrated political and economic community.
The Myanmar junta, which has ruled the former Burma since 1962, declined to recognisea1990 landslide election victory of the opposition National League for Democracy and put its leader Aung San Suu Kyi under house arrest for most of six years.
The United States wants ASEAN, which includes Singapore, to press for reform and political progress in Myanmar. Last month it urged the generals to release more political prisoners.
Singapore,astrong U.S. ally andagrowing centre for wealth management, has opposed sanctions on Myanmar and is believed to be home to the generals' offshore bank accounts.
It isatradition for Singapore to name orchids after visiting dignataries, but an exiled Myanmar politician condemned the orchid naming ceremony.
"The naming of an orchid after PM Thein Sein could be worse than wateringapoison ivy," said Soe Aung,aspokesman for Bangkok-based Forum for Democracy in Myanmar.
Posted by ကိုထိုက် at 01:096comments
ချယ်(လ်)ဆီး ဘောလုံး အသင်းပိုင်ရှင်၊ နအဖ သောင်းကျန်းသူ စစ်ဗိုလ်ချုပ်များနှင့် တေဇ
ချယ်(လ်)ဆီး ဘောလုံးအသင်းပိုင်ရှင် ရုရှား ရေနံသူဌေး၊ မြန်မာ စစ်ခေါင်းဆောင်များနှင့် စီးပွားရေးဆွေးနွေးရန်၊ မြန်မာနိုင်ငံသို့ မကြာမီ ရောက်ရှိမည်။
ရုရှားသန်းကြွယ်ရေနံသူဌေး၊ချယ်(လ်)ဆီးဘော်လုံးအသင်းပိုင်ရှင်ဖြစ်သူ၊ Mr. Roman Abramovich သည်၊ မကြာမီ မြန်မာနိုင်ငံသို့ သွားရောက် လည်ပါတ်မည်ဟု သတင်းများထွက်ပေါ်နေပါတယ်။
သူဟာ သူ့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဂျက်လေယာဉ်ဖြင့်၊ မန္တလေးမြို့၊ တံတားဦး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်ကို၊ ဒီလ ၂၁ ရက်နေ့မှာ၊ ရောက်ရှိလာမယ်လို့၊ သိရှိရပါတယ်။
အာဏာသိမ်း စစ်အစိုးရခေါင်းဆောင်၊ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ နဲ့ တရားမဝင် သားမက်ဖြစ်သူ ဦးတေဇ တို့ရဲ့၊ ဖိတ်ကြားချက်အရ၊ လာရောက်မှာလို့၊ နေပြည်တော်စစ်ရုံးချုပ်ရှိ၊ စစ်ခေါင်းဆောင်မိသားစု အသိုင်းအဝိုင်းမှ၊ ကြားသိရပါတယ်။
သူဟာ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း၊ ဦးတေဇ ဦးဆောင်တဲ့၊ စစ်အစိုးရ ကိုယ်စားလှယ်များနဲ့အတူ၊ သွားရောက် လေ့လာကြမှာဖြစ်ပြီး၊ ရေနံရောင်းဝယ်ရေးနဲ့၊ အခြားစီးပွားရေးကိစ္စရပ်များကိုလည်း၊ ဆွေးနွေးလိမ့်မယ်လို့၊ ကြားသိရပါတယ်။ ( မြန်မာဘောလုံးလောက အဆင့်မြှင့်တင်ရေးအတွက်၊ အကူအညီတောင်းခံဘို့၊ အစီအစဉ်လည်းပါရှိတယ်လို့၊ ပြောဆိုနေကြပါတယ်။ )
ယခုအခါ၊ ဦးတေဇဟာ ယခင် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ရုရှားသံရုံးမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ဘူးတဲ့ ရုရှား သံတမန်ဟောင်းတဦးကို သူ့ရဲ့ အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ် ခန့်ထားပြီး ရုရှားနိုင်ငံနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိကြောင်း ကြားသိရပါတယ်။
ROMAN ABRAMOVICH, OWNER OF CHELSEA F.C AND RUSSIAN OIL BILLIONAIRE WILL VISIT BURMA TO DO BUSINESS WITH BURMESE MILITARY JUNTA.
It is learnt from inner circle of Junta’s families that Russian oil billionaire and Chelsea f.c owner Mr. Roman Abramovich will visit Burma soon.
He will arrive by his own private jet and will be landed at Ta-Dar-Oo International Airport in Mandalay on 21st March, 2009.
He was invited by Burmese Junta and Tay Za, notorious tycoon and un-official son-in-law of junta leader Sr.Gen. Than Shwe.
He will tour around the country together with Tay Za and Junta’s representatives. His visit is believed to be arranged by Tay Za because present business Advisor to Tay Za is Russian national and Ex.staff of Russian Embassy in Burma.
Posted by ကိုထိုက် at 22:534comments
နအဖ အကျင့်ပျက် ဝန်ကြီး၊ ဗိုလ်ချုပ်စောထွန်းရဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်သတင်း
နအဖစစ်အစိုးရရဲ့ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီး၊ ဗိုလ်ချုပ်စောထွန်းကို၊ ကျန်းမာရေးအကြောင်းပြချက်နဲ့၊ အငြိမ်းစား ပေးလိုက်တာပါလို့၊ စစ်အစိုးရအသိုင်းအဝိုင်းက၊ လေသံလွှင့်နေကြပေမဲ့၊ တကယ့်ဖြစ်ရပ်မှန်သတင်းကို၊လူတိုင်း နီးပါးသိရှိနေကြပါပြီ။
မိန်းမပွေတဲ့၊ သက်ကြားအို၊ နအဖ၊ စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေထဲက၊ ခေသူမဟုတ်တဲ့၊ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီး၊ ဗိုလ်ချုပ်စောထွန်းရဲ့၊ မိန်းမလိုက်စားမှုဒါဏ်ကို၊ ရေရှည်မှာသည်းမခံနိုင်တော့တဲ့၊ တရားဝင်ဇနီးဖြစ်သူ၊ “ဒေါ်မြင့်မြင့်ကို” ကစစ်အာဏာရှင်ကြီး၊ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေထံ၊ ကိုယ်တိုင်သွားရောက်တိုင်ကြားလိုက်လို့၊ အခုလိုအရေးယူခံရတာပါ။
ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ထမ်းတဦး(မြေတူးမြေသယ်ယာဉ်မောင်း)ရဲ့၊သမီးဖြစ်သူ၊ တိုင်းရင်းသူလေး “ငွန်ဇာထွေး” ရဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့၊ အသံလေးကိုသဘောကျရာက၊ မျက်စေ့ပါကျသွားပြီး၊ ဆောက်လုပ်ရေးနဲ့ပါတ်သက်တဲ့၊ တီဗီသီချင်းများဆိုရန်အကြောင်းပြချက်နဲ့၊ ၁၀တန်းမအောင်ခင်ကတည်းက၊ ဗိုလ်ချုပ်စောထွန်းအမိန့်နဲ့၊ နေ့စား ဝန်ထမ်းအဖြစ်ခန့်ထားခဲ့ပါတယ်။ မုံရွာစီးပွားရေးတက္ကသိုလ်ကဘွဲ့ရချိန်မှာတော့၊ ဦးစီးအရာရှိအဖြစ်၊ ခန့်အပ်ခဲ့ ပါတယ်။ ယခုပြဿာနာမဖြစ်ခင်ကလေးမှာဘဲ၊ “ငွန်ဇာထွေး” ကို၊ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးရာထူး၊ တိုးပေး ရန်စီစဉ်နေကြောင်းကြားသိရပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်စောထွန်းရဲ့တော်ကောက်ခံရပြီးနောက်၊ ဆုလာဘ်အဖြစ်၊ သူမ ရဲ့ဆွေမျိုးအယောက်(၃၀)ခန့်၊ ဝန်ထမ်းအဖြစ်ခန့်ထားပေးလိုက်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။
ဒါအပြင်၊“ငွန်ဇာထွေး”ရဲ့၊ သူငယ်ချင်းအချို့ကိုလည်း၊ အလုပ်ခန့်ထားခဲ့ပြီး၊ သူတို့ရဲ့ဘဏ်စာရင်းတွေထဲ၊ ငွေကြေး အမြောက်အများ ထည့်သွင်းပေးခါ၊ လိုအပ်လာတဲ့အခါ၊ ခြေတော်တင်ဘို့၊ ကြိုတင်အကွက်ချစီစဉ်ထားတာ လို့၊ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးနဲ့ နီးစပ်သူတဦးက၊ ထုတ်ဖေါ်ပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်၊ အဲဒီ့မိန်းမပျိုလေးတွေ ရဲ့ဘဏ်စာရင်းတွေကို၊ သက်ဆိုင်ရာက၊ စစ်ဆေးနေကြောင်းသိရှိရပါတယ်။
“မ”ကျမ်းကြေသလို၊ လာဘ်စားရာမှာလည်း၊အထူးကျွမ်းကြင်လှတဲ့သူလို့၊ နာမည်ကြီးလှတဲ့၊ ဗိုလ်ချုပ်စောထွန်း ဟာ၊ နအဖစစ်အစိုးရဝန်ကြီးတွေထဲမှာ၊ သက်ဆိုးရှည်သူတဦးပါ။
အင်းဝတံတား၊ တည်ဆောက်စဉ်အခါက၊ ကန်ထရိုက်လုပ်ငန်းအားလုံးနီးပါးကို၊ ဆွေမျိုးနဲ့၊ နီးစပ်သူများကိုသာ၊ ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဝိုင်းဝန်းခိုးစားနေကြတာကြောင့်၊ အဆင့်မမှီတဲ့၊တံတားကြီးအဖြစ်၊နာမည်ကျော်ကြားခဲ့ပါတယ်။ ဖွင့်ပွဲလုပ်ဘို့ပြင်ဆင်နေတာကို၊ လာရောက်စစ်ဆေးတဲ့၊ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲမြင့်တယောက်၊ ပုံမှန်လေတိုက် ရုံနဲ့လှုပ်ယန်းနေတဲ့၊တံတားကြီးပေါ်ကနေ၊ အဆုံးထိမလျှောက်ရဲတာကြောင့်၊ တံတားတဝက်ကနေလှည့်ပြန် သွားခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်တခုရှိခဲ့ပါတယ်။ ( ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီး၊အရေးယူမခံရပါ။ )
ယခင်ကလည်း၊အကြိမ်ကြိမ်လာဘ်စားမှုတွေရှိခဲ့လို့၊ စစ်ထောက်လှမ်းရေးခေါင်းဆောင်၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွှန့် တာဝန်ရှိစဉ်က၊ အရေးယူဘို့တင်ပြခဲ့ပေမဲ့၊ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေက၊ လက်မခံခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ (ကျောက်ဆည်မြို့မှာအတူတူကြီးပြင်းလာခဲ့တဲ့၊ သံယောဇဉ်ကြောင့်လို့ပြောဆိုကြပါတယ်။)
နောက်ဆုံးမှာတော့၊ ဇနီးဖြစ်သူက၊ မြစ်ကြီးနား၊ပူတာအို(၁၂ရက်)ကြာခရီးစဉ်မှာ၊ “ငွန်ဇာထွေး” နဲ့နှစ်ပါးသွားတာ ကို၊ သက်သေအထောက်အထားတွေနဲ့တိုင်တန်းခဲ့တာကြောင့်၊အနားပေးလိုက်တာပါ။ ( ဇနီးသည်ရဲ့တောင်းဆို ချက်အရ၊ ဖမ်းဆီးမှုမပြုလုပ်ခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။)
ဝန်ကြီးပြုတ်ပြီဆိုတော့၊ တရားမဝင်ဇနီးလေးတွေရဲ့၊ ရှေ့ရေးကလည်း၊ ဖြုတ်ထုတ်သတ်ခံရဘို့ဖြစ်လာပါတော့ တယ်။ နီးစပ်သူအချို့လည်း၊အသုတ်လိုက်၊တဖြုတ်ဖြုတ်နဲ့၊ အထုတ်ခံနေရပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်စောထွန်းလက် ထက်နယ်နှင်ခံထားရတဲ့၊ အချို့သောဝန်ထမ်းများကို၊ ဝန်ကြီးအသစ်က၊ ပြန်လည်ခေါ်ယူ တာဝန်ပေးအပ်တာ တွေ၊ တွေ့ရှိနေရပါတယ်။
အကျင့်ပျက်စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေအုပ်ချုပ်နေတာကြောင့်၊ မြန်မာနိုင်ငံဟာ၊ ဖွင့်ဖြိုးမှုနောက်အကျဆုံးနဲ့ အဆင်းရဲဆုံး နိုင်ငံအဖြစ်၊ ရောက်ရှိနေတာပါ။ နအဖစစ်အုပ်စုဟာ၊ ပြည်သူ့အာဏါကို၊လက်နက်နဲ့အတင်းအကျပ်၊ လုယူထား ပြီး၊ အရည်အချင်းမမှီ၊ အကျင့်သိက္ခာမရှိ၊ ဖောက်ပြန်တဲ့စိတ်ဓါတ်များနဲ့၊ မြန်မာလူထုတရပ်လုံးကို၊ ကမ္ဘာ့အ လည်မှာ၊ အရှက်ရစေမဲ့၊ လုပ်ရပ်များကိုသာ၊ အစဉ်တစိုက်လုပ်ဆောင်လျှက်ရှိနေတယ်ဆိုတာ၊ ဒီဖြစ် စဉ်တွေက၊ သက်သေခံလို့နေပါတယ်။
SPDC spread the rumor to general public about the departure of Minister for Ministry of Construction Maj.Gen. Saw Tun was because of health problem but the whole country and people know the true story behind the case.
Maj.Gen. Saw Tun is top of the list among other Generals asachampion of womanizer as contrast to his advance age (he is oldest General after Than Shwe and Maung Aye) and finally his own official wife Daw Myint Myint Ko cannot stand anymore so file the complain direct to Dictator Than Shwe personally. Than Shwe has no choice but to take action and Saw Tun was removed.
Daughter of one of the Construction Department heavy vehicle driver, Ngun Zar Htwe was initially noticed by Minister because of her voice as she use to sing for Ministry’s propaganda song but finally end up asafavorite lover of old General. She was in the payroll of Ministry as daily wages worker at beginning as she is still not even passed the 10th standard exam yet. She gradually passed exam and studied at Monywa University of Economic. Upon graduation, she was immediately appointed as staff Officer after overtaking so many senior persons. She is presently about to promote to the rank of Assistant Director but removal of her lover general is in consequence of her downfall too.
Asaprivilege of General’s lover, all her family members and relatives of almost 30 persons were appointed as service personnel in Ministry payroll. Her friends of good personality and skill with hospitality were also in the payroll and supported them with own bank account plus large amount of cash were deposited by old General. In return, they all are standing by for whenever the aging General requires their services and accompaniment.
Among those selected beauty, some were faded away if she can’t keep good relationship with Ngun Zar Htwe and some were tried to grab the top post from Ngun Zar Htwe but can’t compete and then left behind and faded away. Ngun Zar Htwe isajunior in her department and knows nothing about her work but none of her senior dare to challenge her because of some previous example as those who dare to complain was transferred to remote area.
General Saw Tun is famous not only for womanizing but he is an expert in taking bribe as all SPDC members consider him asarichest person in the gang. He is top of the longest serving minister in the Cabinet.
When Innwa Bridge was built, most of the contracts were awarded to his family members, relatives and affiliates. That bridge was notoriously famous for not up to standard because of too much pilferages and use of non-quality materials. We heard of involvement by Than Shwe family members in construction of that Bridge too. So, when in the preparations for opening ceremony of that bridge, very brave and arrogance Lt. Gen. Ye Myint (drugs trafficker) was not dare to cross the bridge by foot because the bridge was terribly shaking under slight breeze. He is successfully retreated on half way through the bridge.
No one dare to take an action to Gen. Saw Tun because of Than Shwe involvement in taking bribe for building that bridge. When Military Intelligent Chief, General Khin Nyunt was in position, he tried to take action to Saw Tun many time but end up with failure due to Dictator Than Shwe’s protection because they are coming from same place of Kyaukse and probably have some unknown relationship and give and take agreement between them.
This time Than Shwe has no choice because Saw Tun own wife make complain with evidence of how he is performing adulterous act with Ngun Zar Htwe on the 12 days trip to Myitkyinar and
Since Saw Tun departure, his unofficial wife, lovers and associates are end up in big slaughtering vengeance with many followers of Saw Tun were terminated from positions and some arrested. In voice versa, those kicked away by Saw Tun are now reinstated to belonging position, it was learnt.
This is onlyavery small affair among very ugly events in the circle of SPDC and associates. They grab the power by support of guns and weapon from people and rule the country by such kind of unqualified, immoral and corrupted Generals. No wonder as Burma end up in the middle of the world as poorest and least develop country. Shame of you all Generals and supporters of SPDC.
Posted by ကိုထိုက် at 12:20 13 comments
A global signature campaign for the release of Burma’s political prisoners has been on March 13th, on Burma’s Human Rights Day. The campaign aims to collect 888,888 signatures before 24 May 2009, the legal date that Nobel Peace Prize winner Daw Aung San Suu Kyi should be released from house arrest. Over 150 Burma exile and solidarity groups are participating in the campaign. Events and activities will take place around the world, including in Bangkok, Chiang Mai, London, Dublin, New Delhi, Hong Kong, Manila, Seoul, Jakarta, Sydney, and Tokyo.
The petition calls on the UN Secretary General Ban Ki-moon to make it his personal priority to secure the release of all political prisoners in Burma, as the essential first step towards national reconciliation and democratization in the country. The target symbolises 8.8.88, the day the junta massacred some 3,000 people who courageously protested in Burma’s largest democracy uprising.
Posted by ကိုထိုက် at 10:315comments
သူငယ်ချင်းရေ့သတိထာ့း့ 
သမိုင်းမျိုသွားမယ်ဆိုတာမှတ်ထာ့း။
အမှန်တကယ်ကိုတော်ပေသာ့း။
ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့ကြတယ့်။
သူငယ်ချင့်း့ 
အဲ့ဒါဟာ့ 
ဒီမိုကရေစီရဲ့ဖြစ်စဉ်တရာ့း။
သူငယ်ချင်းရေ့မင်းသတိထားလို့
တွေ့တဲ့သူတိုင်းကိုပြောပေးပါ့။
ဇာနည်မောင် ( ၂၁့၂့၂၀၀၉ )
မှတ်ချက် ( ကျနော့ရဲ့ကဗျာကိုဖတ်မိကြတဲ့ ဒီမိုကရေစီလက်တော်သားမျာ့းစစ်အစိုးရ
စိတ်တိုင်းကြလူတွေနီးပါးနဲ့ပြုလုပ်ပြီး တရားမျှတမှုမရှိမဲ့ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို မဲသွား
မပေးကြပဲ * မဲမပေးတဲ့နည်း * နဲ့သပိတ်မှောက်ကြဖို့လက်ဆင့်ကမ်းပြောပေးကြပါခင်ဗျား)
Posted by ကိုထိုက် at 03:445comments
ရန်ကုန်တိုင်း ကြိုးမဲ့ကြေးနန်း နှင့် ယာဉ်ထိန်း တပ်ဖွဲ့ဝင်များ ဖမ်းဆီးခံထားရ
ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်း၊ လုံခြုံရေးနှင့်စည်ပင်သာယာရေး၊ ကိစ္စအဝဝအတွက်တာဝန်ယူထားရတဲ့၊ ကာကွယ်ရေးဝန် ကြီးဌာနမှ၊ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြင့်ဆွေရဲ့အမိန့်အရ၊ ရန်ကုန်တိုင်းကြိုးမဲ့ကြေးနန်း နှင့် ယာဉ်ထိန်းတပ်ဖွဲ့မှ၊ အရာရှိ(၂)ဦး နှင့် အခြားအဆင့်(၆၂)ဦးတို့အား၊ ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ထားကြောင်းကြားသိရပါတယ်။
ပြစ်မှုကတော့၊ယာဉ်စည်းကမ်း၊လမ်းစည်းကမ်း၊ဖေါက်ဖျက်နေတာတွေကို၊ ထိရောက်စွာအရေးမယူတဲ့အတွက် လို့သိရှိရပါတယ်။ အဓိကအကြောင်းရင်းတွေထဲက၊ အချက်တချက်ကတော့၊ မော်တော်ဆိုက်ကယ်တွေ၊ ရန်ကုန်မြို့လမ်းများပေါ်မှာ၊ တရားမဝင်မောင်းနှင်နေတာတွေကို၊ ဖမ်းဆီးခြင်းမပြုဘဲ၊ အခကြေးငွေယူပြီး၊ ခွင့်ပြု ထားတာကြောင့်လို့၊ ပြောဆိုနေကြပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့မှာ၊မော်တော်ဆိုက်ကယ်စီးခွင့်အတွက်၊သက်ဆိုင်ရာဌာနရဲ့ထောက်ခံချက်ဖြင့်၊ခွင့်ပြုလိုင်စင်ရရှိထား၊တဲ့ဌာနဆိုင်ရာများ၊ အဖွဲ့အစည်းများမှလွဲ၍၊ အခြားဘယ်သူမှအသုံးပြုခွင့်မရှိပါဘူး။ ဆိုက်ကယ်ပေါ်ကနေ၊ နိုင်ငံတော် အကြီးအကဲတွေကို၊ လုပ်ကြံမှာစိုးရိမ်လို့တားမြစ်ထားတာလို့၊ သိရပါတယ်။
ဥပဒေအရ၊ ဆိုက်ကယ်စီးနေစဉ်၊ လိုင်စင်ပါရှိရမယ်။ တယောက်ထဲစီးရမယ်။ ဦးထုပ်ဆောင်းရမယ်လို့သတ်မှတ် ထားပေမဲ့၊ အချို့ဝန်ထမ်းတွေဟာ၊ လိုက်နာခြင်းမရှိကြပါဘူး။ အထူးသဖြင့်၊ ရဲထောက်လှမ်းရေး ၊ စစ်ထောက် လှမ်းရေးနဲ့ သတင်းပေးလုပ်ဆောင်နေကြတဲ့၊ “ ကြံ့ဖွတ် ” တွေဟာ၊ အဆိုးဆုံးပါဘဲ။ ယာဉ်ထိန်းရဲတွေ ဟာအဲဒီလိုလူတွေကိုမဖမ်းရဲပါဘူး။ ဖမ်းဘို့ကြိုးစားရင်၊ ဖမ်းတဲ့ရဲကို၊ နယ်ပြောင်းရွှေ့တာ၊ ဒါမှမဟုတ်ရင် အလုပ် ကထုတ်ပြစ်တာတွေနဲ့ကြုံတွေ့ကြရလို့ပါဘဲ။
ရန်ကုန်မြို့အတွင်း၊ မည်သည့်မော်တော်ယာဉ်မှ၊ မှန်တွင် STICKER မကပ်ရဟုအမိန့်ထုတ်ပြန်ထားသော်လည်း၊ အထက်အာဏာပိုင်များရဲ့သားသမီးများ၊ အခွင့်ထူးခံစီးပွားရေးလက်ဝေခံများနဲ့၊ အချို့သောအနုပညာရှင်များ၊ ပိုင်ဆိုင်တဲ့ကားတွေမှာတော့၊ မဲမှောင်အောင်ကပ်ပြီး၊ သွားလာနေကြတာပါ။ ( ဖမ်းဆီးရဲတဲ့၊ ယာဉ်ထိန်းရဲ မရှိသလောက်ပါ။ )
အလားတူ စည်းကမ်းမဲ့ ယာဉ်မောင်းနှင်သူများ၊ စည်းကမ်းမဲ့ အဌားယာဉ်ဌားရမ်းနေသူများဟာ၊ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ နေရာတိုင်းမှာ မမြင်ချင်အဆုံးပါ။(အချို့ယာဉ်ထိန်းရဲများကလည်း၊ ဖမ်းဆီးအရေးမယူတဲ့အပြင်၊ လါဘ်ငွေယူပြီး၊ စည်းကမ်းဖျောက်ဖျက်မှုကို အားပေးနေတာမြင်ကြရပါတယ်။)
ကမ္ဘာအဆင့်မှီမြို့တော်အဖြစ်၊တည်ဆောက်နေပါတယ်လို့၊ အသံကောင်းဟစ်နေကြတဲ့၊ စစ်အစိုးရရဲ့လက်ထက် မှာ၊ဘယ်အရာမှတိုးတက်မှုမရှိပါဘူး။ အရာရာမှာပြည်သူလူထုအတွက်၊ အခက်အခဲများသာဖန်တီးပေးခဲ့ပြီး၊ အထူးသဖြင့်၊ စိတ်ဓါတ်ရေးရာမှာ၊ နှိပ်ကွပ်ခံထားရတာကြောင့်၊ အနာဂါတ်မျှော်လင့်ချက်တွေ၊ ပျောက်ဆုံးနေကြ ရတာပါ။ ဝန်ထမ်းအများစုကတော့၊ လခမလုံလောက်မှုကြောင့်၊ မိသားစုဝမ်းရေးအတွက်၊ အရှက်သိက္ခာကို၊ ဘေးဖယ်ထားပြီး၊ လါဘ်စားရတဲ့ဘဝထဲက၊ ရုန်းမထွက်နိုင်အောင်ဖြစ်နေကြရတာပါ။ ကံမကောင်းအကြောင်း မလှတဲ့အခါကြတော့၊ ဖမ်းဆီးအရေးယူတာခံကြရပြန်ပါတယ်။
အရည်အသွေးညံ့ဖျင်းလှတဲ့၊ စစ်အစိုးရရဲ့၊ လှည့်စားမှုမှကင်းဝေးကြပြီး၊ ပွင့်လင်းတဲ့လူ့ဘောင်သစ်ဆီသို့၊ ရှေ့ဆက်ဘို့ခွန်အားနဲ့၊ အပြောင်းအလဲလုပ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့၊ အမှန်တရားအတွက်တွန်းလှန်နိုင်တဲ့ သတ္တိတွေနဲ့ပြည့် စုံတဲ့၊ မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေ၊ဖြစ်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်။
Posted by ကိုထိုက် at 12:57 10 comments